बाइबलको प्रमाण (भाग २) – Word of Truth, Nepal
जस्तै, बाइबलले भन्छ, मानिस पापी छ; यस कुरालाई पुष्टि गर्नु कुनै गाह्रो कुरा होइन। आँखा खोलेर केवल संसारलाई हेर्नुहोस्! प्रारम्भिक पापको बारेमा उसको धारणा कस्तो छ भनेर प्रश्‍न गरिँदा प्रख्यात बेलायती शब्दकोषकार शमूएल जोनसन (Samuel Johnson) ले जवाफ दिए, “प्रारम्भिक पापको सम्बन्धमा प्रश्‍न गर्नु आवश्यक छैन, किनभने मानव भ्रष्टताको कारण जेसुकै होस्, मानिस प्रत्यक्ष तवरले र आफ्नै स्वीकारले यति भ्रष्ट छ कि स्वर्ग र पृथ्वीका सारा नियमहरू समेत उसलाई अपराध गर्नदेखि रोक्नलाई अपर्याप्‍त छन्।” प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका “धर्मनिरपेक्ष यहूदी” डेभिड बर्लिन्स्कि (David Berlinski) भन्छन्, “यी टिकाटिप्पणीमा पाइने बुद्धिको सराहना गर्नलाई एकजना व्यक्ति ख्रीष्टियन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन” (The Devil’s Delusion, p.33)।
“यी उल्लेखहरू दृष्टिकोणमा आधुनिक छन् जसमा अवास्तविक बढाइ चढाइ र त्रुटीहरूको एउटै छनक कहिल्यै भेटिन्न जब कि त्यस्ता कुरा अन्य प्राचीन लेखोटहरूमा स्वभावैले भेटिन्छन् … शायद अझ ठूलो महत्त्वको कुरा यो छ कि प्रत्यक्ष प्राकृतिक वस्तुका थुप्रै उल्लेखहरूले भरिएको यो ४००० वर्ष पुरानो पुस्तकमा कुनै पनि वैज्ञानिक त्रुटी वा तर्कदोष छैनन्” (The Remarkable Record of Job)।
अय्यूबले हावाको तौल छ भनी भने (“हावाको तौल ठहर्‍याउनलाई” अय्यूब २८:२५)। सत्रौं शताब्दिमा आइपुगेर मात्र ग्यालेलियो (Galileo) ले वायुमण्डलको पनि तौल छ भनेर पत्ता लगाएका हुन्, र एरोडाइनामिक्स (aerodynamics) नामक आधुनिक विज्ञान यही वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित छ। अझ, पृथ्वीको मौसमको क्रियाकलापमा हावाको तौलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। “हावाको तौल” ले समुद्रहरूबाट वाष्पिकरण भएको पानीलाई महादेशहरूको माथि-माथि भू-भागहरूमा बोकेर पुर्‍याउने विश्वव्यापी हावाको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्दछ (Morris, The Remarkable Record of Job)।
“यसको मतलब, प्रकाश कुनै स्थान वा परिस्थितिमा अवस्थित हुने कुरा होइन। न ता त्यो त्यत्तिकै एक्कासि प्रकट हुने वा अलप हुने वस्तु हो। प्रकाशले यात्रा गरिरहेको हुन्छ! त्यो एउटा “बाटो” मा वास गर्दछ, सधैं कुनै अन्यत्र स्थानतर्फ गइरहेको हुन्छ। यद्यपि त्यो सामान्यतयाः किरणहरूको रूपमा यात्रा गर्दछ, कहिलेकाहिँ त्यसले कणहरूको खोलोको रूपमा हिँडिरहेको जस्तै गर्दछ, तर त्यो जहिले पनि चलिरहेकै हुन्छ। जब प्रकाश रोकिन्छ, तब त्यहाँ अन्धकार हुन्छ। तसर्थ, अन्धकार अचल कुरा हो, स्थानमा बसिरहने; तर प्रकाश गतिशील कुरा हो, बाटोमा वास गरिरहने” (Morris)।
बोटबिरूवा र पशुपक्षीहरूले आफ्नो-आफ्नो जातिअनुसार पुनरुत्पादन गर्दछन् भनेर बाइबलले भन्दछ (उत्पत्ति १)। यो कुरा आधुनिक विज्ञानको सारा अवलोकन र परीक्षणसित ठ्याम्मै मेल खान्छ। हरेक जातिअन्तर्गत निकै विविधता पाइन्छ, विभिन्न खालका गुलाफहरू, रूखहरू, भ्यागुताहरू, कुकुरहरू, तर फरक-फरक जातबीच — गुलाफ र रूख र भ्यागुता र कुकुरकाबीच — पुनरुत्पादन हुने गर्दैन।
समुद्रमा नदी छ: विषम खडेरीमा पनि त्यो टुट्दैन, र भयङ्कर बाढीमा पनि त्यो उर्लेर आउँदैन; त्यसका किनारहरू र पीँध चीसो पानीमा रहेका छन्, जब कि त्यसको धारचाहिँ न्यानो छ; मेक्सिको खाडी त्यसको मुहान हो भने त्यसको मुखचाहिँ आर्कटिक समुद्रमा पर्दछ। यसैलाई भनिन्छ गल्फ स्ट्रीम” (Maury, The Physical Geography of the Sea, 6th ed., 1856, p.25)।
प्राणचाहिँ रगतमा हुन्छ भनेर बाइबलले बताएको छ (लेवी १७:११)। यो कुरा करीब ३,५०० वर्ष अगाडि लेखिएको थियो तर हालको समयमा आएर मात्र यसलाई वैज्ञानिक तवरले बुझ्न सकियो। शताब्दियौंसम्म रोगीलाई रक्तस्राव गराएर उपचार गर्ने चलन (blood-letting) थियो। अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति जर्ज वाशिङ्टन यही गलत अभ्यासले गर्दा अनावश्यक रूपमा चाँडै मरेको हो भनिन्छ। आधुनिक औषधी विज्ञानले बाइबलले उहिलेदेखि सिकाउँदै आएको कुरालाई अब सिकेको छ, कि जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ। रक्तनली र केशिकाहरू मिलेर बनेको अचम्मको रक्तसञ्चार प्रणालीले जीवन-दिने अक्सिजन र अन्य आवश्यक तत्त्वहरूलाई शरीरको प्रत्येक अङ्गमा पुर्‍याउने काम गर्दछ। साथै संक्रमणको प्रतिकार गर्ने र रगत जम्ने जस्ता “जीवधारीको प्राण” लाई आवश्यक पर्ने प्रकृयामा पनि रगतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
अनुग्रहले मुक्ति पाइन्छ भन्ने मुक्ति सम्बन्धी शिक्षा सिकाउने एउटै मात्र धर्मशास्त्र बाइबल हो। अन्य सबैले कामहरूले मुक्ति पाइन्छ भन्ने सिकाउँछ। हिन्दूधर्म अनुसार आफ्नो धर्म गरेर र आफ्नो कर्म पूरा गरेर मुक्ति पाइन्छ। मुस्लिमधर्म अनुसार अल्लाहमा समपर्ण गरेर र उहाँका आज्ञाहरू पालन गरेर मुक्ति पाइन्छ। बुद्धधर्म अनुसार जीवनकर्मद्वारा र ध्यानद्वारा र सन्यासद्वारा मुक्ति पाइन्छ। काठमाडौंको बौद्ध स्तूपलाई हेर्न जानुभयो भने त्यहाँ तपाईंले दिनको कुनै पनि समयमा बौद्धमार्गीहरू स्तूपलाई चक्कर मारिरेहिका, माला जपिरहेका, “ओम्मेमे-पेमे” घुमाइरहेका देख्‍न सक्नुहुन्छ। मुक्ति कमाउन खोजिरहेका हुनाले नै तिनीहरू यी सब गर्दछन्।
“किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ; अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो; कामहरूबाट होइन, नत्र ता कसैले घमन्ड गर्नेछ” (एफेसी २:८-९)।
“तर हामी सबै अशुद्ध थोकजस्ता छौं, र हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू मैला थाङ्नाहरूसरह छन्; अनि हामी सबै पातजस्तै ओइलिन्छौं, र हाम्रा अधर्महरूले बतासले झैं हामीलाई उडाएर लगेका छन्” (यशैया ६४:६)।
होइन, मुक्ति अति गहिरो दया गर्ने प्रेमिलो परमेश्वरबाटको अनर्जित सित्तैंको वरदान हो। एउटा ख्रीष्टियन भजनमा जसरी भनिएको छ, “हामीलाई तिर्नै नसक्ने ऋण लागेको थियो; उहाँले तिर्नै नपर्ने ऋण तरिदिनुभो।”
“किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुभयो — उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्” (यूहन्ना ३:१६)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-03 16:17:412020-11-13 16:03:19बाइबलको प्रमाण (भाग २)
बाइबलको प्रमाण (भाग १) दैनिक बाइबल अध्ययन